05/07/2018 - Page 2 sur 4 -
Ivandry : Lehilahy namono tena tamin’ny tsatok’antsy
05/07/2018 admintriatra 0
Raim-pianakaviana 32 taona no maty nanatsatok’antsy ny tenany teny Ivandry afak’omaly tokony tamin’ny 09 ora sy sasany alina. Araka ny voalazan’ny teo anivon’ny polisim-pirenena , dia noho ny resaka hasarota-piaro tamin’ny vadiny, izay vehivavy 46 …Tohiny
Alarobia : Fanotofana tany niteraka savorovoro
Nisehoana savorovoro nataona andian’olona indray teny Morarano Alarobia, afakomaly tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany alina. Araka ny loharanom-baovao, dia resaka fanotofan-tany nataona karana teny an-toerana no nahatonga izany korontana izany. Tsy faly ary …Tohiny
Tsaratanàna : Zaza nariana tanaty rano
Tany amin’ny ranon’I Betioky indray no nahitana fatin-jaza vao teraka manodidina ny iray volana, any amin’ny faritra Tsaratanàna. Araka ny loharanom-baovao dia omaly maraina ireo olona mpampiasa ny rano no nahatsikaritra ity zaza narian-dray aman-dreniny …Tohiny
Androy, Atsimo, Atsimo Andrefana : Miseho amin’ny endriny maro ny herisetra
Isan’ny faritra mbola hanjakan’ny herisetra ny faritra Androy, Atsimo ary Atsimo Andrefana. Ary miseho amin’ny endriny maro izany herisetra izany, raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon’ny sampan-draharaha misehana ny miralenta eo anivon’ny ministeran’ny Mponina, fiahiana …Tohiny
Filoha tao amin’ny France 24 : « Misokatra amin’ny rehetra i Madagasikara »
Filoham-pirenena afrikana fahatelo noraisin’ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, ny filoha Malagasy, Hery Rajaonarimampianina. Fivahinianana tamin’ny fomba ofisialy izay tsy navelan’ireo haino aman-jery frantsay handalo fotsiny. Mpanao gazety Frantsay maromaro no afaka nitafa tamin’ny filoham-pirenena Malagasy, ...Tohiny
Filoha Indianina Ram Nath Kovind : Horaisin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina eny Iavoloha
Andry Rajoelina : Tsy manana olona
Fanadihadiana ny mpiasan’ny VIVA : Tsy misy hidiran’ny asa fanaovan-gazety